Madaxweynaha Jubba oo ku amray ciidamada maamulka in ay tagaan goobo loo cayimay – Radio Daljir
Diseembar 5, 2013 4:13 b 0
Kismaayo, December 5, 2013 – Madaxweynaha maamulka KMG ah ee Jubba Sheikh Axmed Maxamed islaam (Madoobe) ayaa amar ku bixiyey in dhamaan ciidamada maamulka Jubba ay isaga baxaan magaalada xeebta ah oo ay tagaan meelo loo cayimay.
Digreeto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Jubba ayaa lagu amray in ay ciidamada guutada 94 ee ciidanka Jubba ay la wareegaan amaanka guud ee magaalada Kismaayo iyo gacan ku hayntiisa, sidoo kale waxaa ciidanka lagu amray in ay ka fogaadaan fara-gelinta hantida shacabka.
?Talaabo adag ayaa laga qaadi doonaa askarigii lagu eedeeyo in uu fara-geliyey hantida shacabka, si dhaqso ah ayaa maxkamad loola tiigsanayaa isagoo kadib mari doona ciqaab adag.? Ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Jubba.
Gen. Cabdi madoobe oo ka mid ah saraakiisha maamulka Jubba oo wareegtada saxaafada u akhriyey ayaa ciidamada u sheegay in ay gacanta ku soo dhigaan askarigii la arko isagoo hub ku dhex wata magaalada oo aan ka tirsanayn ciidanka cusub ee loo xil saaray amaanka magaalada.
Nabadgelyada magaalada Kismaayo ayaa ka soo daraysay mudooyinkii dambe, waxaa dhacay qaraxyo lala eegtay ciidamada maamulka iyo saraakiil iyo weliba goobo ay degan yihiin dad shacab ah oo ku yaala magaalada Kismaayo, taas oo cabsi ku abuurtay bulshada magaalada xeebta ah.